トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Mahatsara sy maharatsy azy, izay mikendry ny Xintai in pachinko parlors
Ao amin'ny pachinko efi-trano, sns teo anoloan'ny gara, ianao koa dia afaka milalao nampidirina navoaka avy hatrany taorian'ilay Xintai. Ao, ny tombony sy ny fatiantoka mikendry Xintai toy izany, isika dia hijery izay anisan'ny. Voalohany indrindra, dia soa, andro vitsivitsy ny fampidirana Xintai, dia avo fa miezaka ny fantsika-Horukon anisan'izany mamy ny andro et? amin'ny manodidina ny voalohany. Na dia
Xintai, dia efa nisy koa nampidirina tao amin'ny magazay akaiky ny modely mitovy tamin'izany andro izany. Xintai dia, mazava ho azy satria, rehefa vanim-potoana vokatra izany, ny olona izay te-nikapoka dia matetika. Na izany aza, dia efa akaiky to've omena mpanjifa toy izany, tsy manana heviny mba hampiditra fahoriana be. Avy eo, mba mamy andro vitsivitsy hatramin'ny andro voalohany, dia matetika aho no pachinko fivarotana ka dia ny hafainganam-pandeha no ahazoana rotational.
ho afa-tsy, raha tsy afaka mikapoka amin'ny fivarotana ihany no tao amin'ilay faritra ambony teny fampidirana, dia mety hisy toe-javatra, satria fampahiratana ny tifitra foana koa ny olona nivory teo.
Na izany aza, raha mbola tahaka ny fototra fironana ho amin'ny lalao ao Xintai, dia fampidirana ny telo andro dia misy maro izay mikendry maso.
sy ny fatiantoka, fa ny Xintai dia hevitra fa sarotra ny ho lasa latabatra maimaim-poana, dia ny hoe mety ho sitrana amin'ny tokony ho 3 andro taty aoriana. Voalohany Xintai, nampahafantatra ny andro voalohany ihany koa ny loteria, hatramin'ny andro faharoa, dia matetika ihany koa ho lasa latabatra feno avy amin'ny maraina. Ankoatra izany, ao amin'ny raharaha toy izany modely malaza, na ny olona sasany foana ny afaka miandry, raha misy payout, dia inona no ho tsy azo inoana ho afaka latabatra. Raha
voa tokoa, dia tsy hiditra any ihany indray maraina.
Ary dia fantsika fanitsiana sy Horukon toerana, Xintai mba ny Barker, andro telo-toerana avy amin'ny teny fanolorana ny andro voalohany, nefa manokatra noho ny ara-dal?na fanitsiana, isan'andro 4 toerana, dia toy izany no hiditra amin'ny fomba famerenana , manana henjana kely.
ity dia Xintai ny tombontsoa sy ny fatiantoka ny eo ho eo ny pachinko efi-trano, ao amin'ny efi-trano mahatsiravina pachinko, hanenjanana kokoa avy Xintai teny fanolorana ny andro voalohany, dia misy ihany koa ny mpivarotra izay tonga amin 'ny famoriam-bola. Ary tamin'ny Xintai dia toy izany pachinko efi-trano, manao ny marina Mino aho fa misy soa kely.
Raha niresaka an-keriny, dia momba ny zava-misy fa ny fitokonana ny modely farany. Ao ny fanasitranana avy any andro iray, ny soa azo avy Xintai dia hanjavona rehetra. Raha ny tanjon'ny ny
Xintai, mankanesa any nikapoka ny fampidirana ny andro voalohany amin'ny mendrika, avy eo roa andro ianao Raha misy fantsika fanitsiana sy Horukon toerana, heveriko fa ho mety, hitily mifantoka amin'y fomba.
modely farany, fa ianareo kosa te namely kokoa raha malaza modely, raha ny tsora-kazo mba handresy, Xintai Mino aho fa sarotra ny hanova. Jereo ny Xintai fironana tamin'ny fotoana ny fampidirana ny
mandeha tsara pachinko parlors, na ny toeram-pivarotana maro ny tombontsoa avy amin'ny tany Xintai, na miezaka ny voa avy amin'ny Fantaro raha toa ny fatiantoka miantsena matetika avy.